जुम्ला कारागारका कैदीले डिआइजीसँग किताब मागेपछि..
२४ चैत । डिआइजी महेशविक्रम शाह जुम्ला कारागार निरीक्षणमा गएका बेला एक कैदीले भने, 'सर, मलाई किताब पढ्ने मन छ, तर यहाँ पाइन्न। केही व्यवस्था हुन सक्दैन?'
डिआइजी शाह झल्याँस्स भए।
कारागारलाई सुधारगृह बनाउनुपर्छ भनेर सबै भन्छन्। पढ्ने-लेख्ने वातावरणै नभएपछि कसरी सुधारगृह हुन सक्छ?
जुम्लाका ती कैदीको प्रश्नले शाहलाई यति चिमोट्यो, उनी आफ्नो क्षेत्रका प्रत्येक कारागारमा पुस्तकालय स्थापना गर्न तम्सिए।
यो उनकै सक्रियताको नतिजा हो, आज कर्णाली प्रदेशका सबै कारागारमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ। ती पुस्तकालय शनिबार उद्घाटन गरिएका छन्।
सफा र व्यवस्थित कोठा। कोठाको भित्ताभरि आधुनिक दराज। दराजभित्र ख्यातिप्राप्त लेखकले लेखेका जीवनोपयोगी, प्रेरणादायी, साहित्यिक, सिकाइमूलक, केही जीवनी र केही आत्मवृत्तान्त पुस्तकको संग्रह।
यो सुर्खेत जिल्लास्थित कारागार पुस्तकालयको दृश्य हो।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सुरू गरेको ‘कारागारलाई किताब’ अभियानअन्तर्गत सुर्खेत कारागारको पुस्तकालय शनिबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उद्घाटन गरेका हुन्।
सुर्खेतसहित प्रदेशका रुकुम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र डोल्पा जिल्लामा यस्ता पुस्तकालय स्थापना गरिएका छन्। केही जिल्लामा कारागारभित्र र केहीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयभित्र पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ।
हुम्ला र मुगुमा कारागार भवन निर्माण क्रममा रहेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र पुस्तकालय राखिएका छन्।
‘अब किताब कैदीहरूले पढ्न पाउनुहुनेछ, कारागार अब साँचो अर्थमा सुधारगृह बन्नेछ,’ डिआइजी शाहले भने, ‘यसले कारागारभित्र समय बिताउन मात्र हुने छैन, कैदीहरूलाई समाजमा फर्किसकेपछि सकारात्मक कार्य गर्न पनि प्रेरणा मिल्ने छ।’
पुस्तकालय स्थापनाका अभियान्ता डिआइजी शाह आफू पनि लेखन क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तित्व हुन्। शाहले ‘छापामारको छोरो’ कथा संग्रहबाट २०६३ मा मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए।
‘म ती जुम्लाको कारागारमा रहेका कैदीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, उनको इच्छाका कारण नै अब कर्णाली प्रदेशको सबै कारागारमा रहने कैदीले पुस्तक पढ्न पाउनुहुनेछ,’ उनले भने।
‘कारागारलाई किताब’ अभियानअन्तर्गत २१ लाख बराबर किताब संकलन भएका थिए। ती पुस्तकलाई विभिन्न जिल्लामा बाँडेर पुस्तकालय स्थापना गरिएको हो।
शाहका अनुसार कारागारमा स्थापना गरिएका पुस्तकालयमा ४/५ वटा त्यस्ता पुस्तक पनि छन्, जो संसारमा महत्वपूर्ण मानिएका १० वटा पुस्तकमध्ये पर्छन्।
पुस्तकालय स्थापना गरिएका कारागारमा ‘बुक क्लब’ समेत गठन गरिएको छ। कैदीहरूमध्येबाट केही कैदीको नेतृत्वमा गठित क्लबका नेतृत्वकर्ता तथा सदस्यले आफ्ना साथीहरूलाई पुस्तक पढ्न प्रेरित गर्नेछन्। उनीहरूले आफूले पढेका किताबबारे अरू कैदीहरूबीच समीक्षा गर्दै पठन विकासमा सहयोग गर्ने छन्।
त्यस्तै, क्लबको तर्फबाट प्रत्येक शनिबार अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिने छ।
अन्तर्क्रियामा कैदीहरूबीच आ–आफूले पढेका पुस्तकको समीक्षा हुनेछ। त्यस क्रममा धेरै किताब पढ्ने कैदीलाई पुरस्कारस्वरूप किताब नै दिइनेछ।
पुस्तकालय उद्घाटनसँगै ‘लेखकहरूसँग कैदी’ अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको छ। लेखक र कैदीहरूबीच पुस्तक र जीवनको समीक्षा गर्न यो कार्यक्रम अयोजना गरिएको हो।
यस क्रममा लेखकहरू सनत रेग्मी, नयनराज पाण्डे, नवराज पराजुलीले शनिबार सुर्खेत कारागारका कैदीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरे भने निबन्धकार शेखर खरेल र उपन्यासकार कुमार नगरकोटीले दैलेख कारागारमा रहेका कैदीहरूसँग छलफल गरे।
त्यस्तै, सल्यानमा उपन्यासकार उमा सुवेदी र रामलाल जोशी, रुकुम (पश्चिम) मा कथाकार राजेन्द्र पराजुली र निबन्धकार कुमारी लामा, जाजरकोटमा उपन्यासकार अर्चना थापा र सुविन भट्टराई, कालिकोटमा उपन्यासकार युग पाठक, जुम्लामा उपन्यासकार शिवानीसिंह थारु र डोल्पामा उपन्यासकार तथा कथाकार अमर न्यौपाने कैदीहरूसमक्ष प्रस्तुत भए।
मुख्यमन्त्री शाहीले पुस्तकालय स्थापनापछि कारागार 'गुरूकुल' भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘यी किताब अध्ययन गरेर तपाईंहरू यहाँबाट घर फर्किंदा गुरु बनेर फर्किनुस्,’ उनले भने।
२०७५ चैत २४ मा प्रकाशित